mercredi, 26 juillet 2017 21:37
Toamasina : Tapaka ny herinaratra manerana ny tanàna
Tamin'ny 12ora sy 40 min no tapaka ny jiro. Raha ny fanazavana avy eo anivon'ny Jirama Toamasina dia vokatry ny fahasimban'ny tambazotra Volobe-Toamasina sy ny olana amin'ny gropy ao amin'ny foibe famokarana herinaratra Tamatave 4 sy ny an'ny Enelec no fototry ny olana. Andalam-panamboarana ny teknisiana ny tolak'andro teo.
mercredi, 26 juillet 2017 21:18
Tolagnaro: Nahazo anarana “Bonne Chance” ilay zaza nisy nanary tao anaty dabam-pako
Salama tsara ilay zazalahy kely sahabo ho roa taona eo, nisy nanary tao anaty dabam-pako ary hitan’ny mpiasan’ny Kaominina handraoka fako tao amin’ny Fokontany Esokaka ny marainan’ny 15 jolay 2017 tokony ho tamin’ny 7ora.
Nanao tsipaipaika izay nandalo ary nomena sakafo ilay zaza. Nentina tao amin'ny lehiben’ny Fokontany Esokaka ilay zaza taoran’izay. Ity ramatoa amin’ny sary ity no nandray an-tanana azy avy eo, ary dia nahazo anarana “Bonne Chance” ilay zazalahy kely.
Efa hita ilay reniny niteraka azy ka efa any amin'ny Polisy. Marihina fa voararan’ny lalàna ary mahavoasazy mafy ny manary zanaka.
mercredi, 26 juillet 2017 20:52
Tsiandro – Antsalova: Nodoran'ny dahalo omaly maraina ny tanànan’i Mahatsinjo
Nodoran'ny dahalo 15 lahy omaly maraina i Mahatsinjo, tanàna ao amin’ny renivohitry ny Kaominina Bemaraha Antsinanana na Tsiandro. Rehefa niditra nandroba ireto dahalo dia nidaroka izay tratrany tao ka olona 2 lahy no vaky loha. Rehefa nalainy izay zakany dia nodoran’ny dahalo ny tanàna ka trano miisa 9 no kila forehitra.
Marihina fa efa fongana tanteraka ny omby ao amin’ny io tanàna io noho ny hetraketraky ny dahalo ihany. Efa may nodoran'ny dahalo ihany koa io Tsiandro io tamin’ny taona 2013. Ny tena mahagaga ny mponina dia izao : nankaiza ireo Zandary voatendry hiasa ao ?
Marihina fa misy “Poste Avancé” ao amin'io Kaominina io ary efa misy trano ipetrahana ireo Zandary nahazo taratasy fanendrena hiasa any.
Araka ny filazan'Atoa Amir Sebastien Chebany, Ben'ny Tanàna dia efa tamin’ny 15 jolay no niala tany ireo Zandary ireo ary tsy niverina hatramin’izao, kanefa efa nahazo toromarika tamin’ny Solombavambahoaka voafidy teto Antsalova Ramarolahy Maurice fa tsy tokony hiala any ry zareo raha tsy misy mpisolo toerana, ary novidianan’ny Depiote vilany sy kojakojan-dakozia ny Zandary tao ho fanampiana azy ireo.